म सपना बताउन सक्नुहुन्छ? हामी सिक्न!
म सपना बताउन सक्नुहुन्छ? अब हामी बुझ्न हुनेछ। त्यो समय देखि, मानव जाति थाले रूप मा, मान्छे, तिनीहरूले सुत्न जब तिनीहरू फरक तस्वीर घटनाहरू हेर्न। यी घटना भनिन्छ सपना हो। लामो देखि मान्छे सोध्दै हुनुहुन्छ: आफ्नो दर्शनको अर्थ के हो। तिनीहरूले कहाँबाट? साँचो आउँछन्? तिनीहरूलाई के आशा हामी गर्न सक्छौं? र तपाईं सपना बताउन सक्नुहुन्छ?
त्यहाँ आफ्नो रात दृष्टि सपनामा एक व्यक्ति एक निश्चित चिन्ह, पछि जीवनमा कठिन परिस्थितिमा उहाँलाई मदत गर्नुभएको देखे कि, आउने साँचो, वा, उदाहरणका लागि मान्छे र कथाहरू थुप्रै कथाहरू छन्। धेरै पनि लामो-मृत नातेदार र साथीहरू हेर्नुहोस्। यहाँ प्रश्न उठ्छ: यो पनि सम्भव छ? निद्रामा को अचानक संकेत र के वास्तविकता मा भयो - यो एक साधारण संयोग छ? खैर, पहिलो कुरा पहिले।
सपना व्याख्या प्रविधी सरल छ यो पहिलो नजर मा लाग्न सक्छ रूपमा। राम्रो सपना हरेक हप्ता टाउको परिवर्तन गर्न आवश्यक सम्झना गर्न: र यो आफैलाई बुझ्न को लागि अघि, एक सरल नियम सम्झना गर्न। अर्को शब्दमा, हरेक सात दिन, तपाईं जहाँ तपाईं विगतमा सात दिन खुट्टा राख्न खाट को छेउमा टाउको पकड गर्न आवश्यक छ। तर तपाईं अन्तिम रात देखे सबै भन्न अनावश्यक? तपाईंलाई आफैलाई जस्तै विश्वास, एक व्यक्ति छ भने, र जस्तै साझेदारी, त्यसपछि तपाईं तुरुन्त सपना बताउन आवश्यक! यो राम्रो वा खराब थियो कुरा छैन। तिनीहरूले यस्तो अवस्थामा भन्न रूपमा, mages, सपना राम्रो छ, र तपाईं मित्र यो बताउन भने, तब यो साँचो हुनेछ सम्भावनालाई, बढ्छ धेरै पटक। Conversely, दर्शनले खराब छ, र मानिस उहाँलाई आफ्नो घनिष्ठ, यो एक वास्तविकता बन्न कि likelihood भन्नुभयो भने, यो धेरै कम हो।
सोमवार रात सपना
यसलाई देखेको बताए छ आइतवार देखि सोमवार गर्न सपना साँचो आउन। जहाँ अफवाहहरु अज्ञात छन् भयो। यस क्षेत्र मा पेशेवर यी सपना केही मतलब बताए।
तिनीहरूले खाली छन् र एक कुनै मनसाय नेतृत्व छैन। तर सक्रिय गम्भीर विज्ञान रात दर्शन मा संलग्न छन् ती, तिनीहरूले तिनीहरूले आइतबार देखि मान्छे देखि सोमवार सपना सुन्न गर्दा साँचो आउन, त्यसपछि अफवाहहरु विश्वास अनुभवहीन मूर्ख लागि उनलाई लिन भन्नुहोस्। वास्तवमा, एक वास्तविकता शनिबार गर्न शुक्रवार देखि मान्छे देख्नुहुन्छ कि सपना छ बन्न बढी सम्भावना। कम से कम, त्यसैले व्यवसायीक भन्छन्।
दृष्टि, दोहोरिन दुई वा तीन पटक, धेरै महत्वपूर्ण छन्। तिनीहरूले अक्सर संग समीकृत छन् भविष्यसूचक सपना। उच्च सम्भावना संग साँचो आउने ती छ। सबैभन्दा सपना नौ महिना अर्को दिन गरेर खाली मा उत्तेजित गर्दछ। भविष्यसूचक - सपना चंद्र ग्रहण गर्न attributable छन्। र तपाईं वा अरू कसैले सुरुतिर सम्म बिहान तीन बजे देखे कि ती साँचो लगभग बिजुली गति संग आउनेछ।
सपना वा रात को दर्शन बारेमा मौन राख्न चाहे बताउन?
मान्छे कहिलेकाहीं राति हेर्न एक भयानक र खराब - सुन्दर, मनोरम सपना, र कहिले काँही छन्। त्यसपछि प्रश्न खडा: के सपना बताउन सक्नुहुन्छ? खेतमा विशेषज्ञहरु भन्न रूपमा, उदाहरणका लागि, माथि लगे खराब कुरा वा भयानक हो भने, विपरीत, रुचि छैन तपाईंलाई रुचि कि देखेर, वा, यो सम्भव बताउन, फेरि, मात्र, मान्छे बन्द गर्न माथि उल्लेख गरिएको छ, तर। त्यसैले तपाईं सपना खराब सामग्री बताउन सक्नुहुन्छ?
जवाफ छ: निश्चित छैन! न त गरिब रात दृष्टि वा दिनमा तपाईंले भ्रमण गर्न विश्वसनीय हुनुपर्छ, विशेष गरी यति नजिक मानिसहरू। नियम यस्ता दर्शनहरू छैन साँचो आउँछन्।
खाजा अघि शेयर
त्यहाँ एक व्यक्तिले आफ्नो दृष्टि साँचो आउन चाहन्छ भने, खाजा अघि सपना बताउन भने, यो त हुनेछ कि एक विश्वास छ। यो सिद्धान्त पनि सेज पुष्टि भएको छ।
शान्त हुन - तर त्यहाँ पूरा भएको तपाईंले देख्नुभएको गर्न चाहनुहुन्छ भने भन्छन् कि अर्को पौराणिक कथा छ! एक अन्य contradicts। त्यसैले हामी के विश्वास गर्नुपर्छ? साँच्चै यो सपना बताउन सम्भव छ कि छैन भनेर प्रश्न जवाफ कसले?
मित्र को सपना
यहाँ एक लामो समय को लागि खराब कुरा तपाईं एक्लै सपना भने गर्न के र नजिकको व्यक्ति छ, तर बस, उदाहरणका लागि, यस कारण, उहाँको बारेमा आवश्यक जान्नुपर्छ गर्ने परिचितहरू बारेमा, सायद, आफ्नो भाग्य निर्भर हुनेछ ?! निस्सन्देह, तपाईं निश्चित निद्रामा कसैले बताउन आवश्यक छ भन्ने महसुस भने, यो सबै भन्दा राम्रो यसलाई के छ। विशेष गरी यो साथी वा नातेदार गर्न आउँछ भने। मान्छे को सपना मा एकदम अक्सर घटनाहरू र हुन बारेमा हुन् भनेर क्षणमा हेर्नुहोस्। र हामी अवस्थामा जहाँ सपना शाब्दिक मानिसहरूको जीवन सुरक्षित को एक महान नम्बर थाहा छ। वास्तवमा, Wandering को राती, तपाईं भविष्यको लागि तथाकथित सुझाव, चेतावनी देख्न सक्छौं। यी संकेत दिएको, मानिसहरू अक्सर समस्या जोगिन।
व्यावसायिक mages सबै सपना उत्तिकै साँचो हो भन्छन्। enforceability दर्शन गणना: तर निम्न यसो हुन जो गर्न सक्छन् सम्भावना अनुसार एक निश्चित अनुपात छ। तर केवल महिना को संख्या मा तपाईं सपना देखेका छौँ कि। नयाँ चन्द्र मा यो खाता सामान्यतया सञ्चालन गरिएको छ।
सामान्य मा, उनि, कति मान्छे, यति धेरै राय भन्न रूपमा। भने गरिएको छ के को आधारमा संक्षेप गर्न, यो एक निश्चित निष्कर्षमा बनाउन सम्भव छ। म सपना बताउन सक्नुहुन्छ? तपाईं महसुस गर्न के गर्न आवश्यक यो प्रश्नको जवाफ। बस भविष्यमा यसलाई आफूलाई निर्भर थाहा छ, र यो धेरै अस्थिर छ।
तपाईं आफ्नो भविष्य को सुझावको साथ राम्रो कुरा, को सपना देख्यो भने, यो लामो जो कोहीले बताउन छैन रूपमा यो सत्य होइन आउँछन् यो राम्रो छ। र त्यसको विपरीत, तपाईं खराब कुरा हेर्न भने, र यो पनि यो मामला मा हुनेछ भनेर डर, केही राम्रो जो कोहीले बताउन छैन। सपना बताइरहेका देखि, तपाईं यसलाई राम्रो बुझ्न प्रयास, यो पनि बुझ्न, ठूलो स्वरले सोच्न सुरु, र हामी थाह छ, भौतिक हो, लाग्यो!
सेक्स र प्रेम गर्न षडयन्त्र
मध्यम गर्ने हो? को क्षमता कहाँ छन्?
संसारमा सबै भन्दा प्रसिद्ध भूत
Rune Vuno: मूल्य, प्रेम र सम्बन्ध व्याख्या
पाक साक्षरता: नोक्सानी र झिंगा को लाभ
Valide सुल्तान: जीवनी र पौराणिक कथा
पूर्वप्राथमिक बच्चाहरु को Sociometric सर्वेक्षण
Beyl Kristian - Filmography। मसीही Bale संग सिनेमा। फिल्म "को मेकानिक," मसीही Bale संग
एक पैदल लागि समारा मा आकर्षण